Cristiano Ronaldo Oo Loo Soo Bandhigay Funaanad Qaas Ah Kadib Markii... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Cristiano Ronaldo oo loo soo bandhigay Funaanad qaas ah kadib markii…
Cristiano Ronaldo oo loo soo bandhigay Funaanad qaas ah kadib markii…
Cristiano Ronaldo ayaa loo soo bandhigay funaanad xusuus gaar ah oo uu sameeyay madaxweynaha kooxda Juventus Andrea Agnelli markii uu jabiyay rikoorkii rasmiga ahaa ee gooldhalinta Pele ee ahaa 767 gool.
Weeraryahanka kooxda Juventus ayaa ka sarre maray guud ahaan xidiga xulka Brazil isbuucii hore isagoo shabaqa soo taabtay seddexleey kulankii ay 3-1 kaga badiyeen Cagliari si ay u gaaraan goolashiisa 770 gool.
Kahor kulanka Old Lady’s Serie A ee ay la ciyaareen Benevento axadii, Ronaldo waxaa loo gacan geliyey shaati ‘G.O.A.T 770’, isagoo sheeganaya in weeraryahanka reer Portugal uu yahay ‘Greatest Of All Time’.
Hay’adda maamusha kubadda cagta adduunka FIFA ma hayso liis rasmi ah oo ah cidda dhalisay goolasha ugu badan taariikhda, sidaa darteed dhamaadka ugu sareeya liiska ayaa si kulul loogu tartamayaa.
Ronaldo ayaa lagu amaaney bilowgii Janaayo inuu ka tanaasulay wadarta guud ee Josef Bican laakiin Czech FA ayaa sheegtay in weeraryahanku uu runtii dhaliyay 821 gool ka dib markii dib loo eegay tirakoobkiisa intii lagu jiray xirfadiisa intii u dhaxeysay 1931 ilaa 1955.
Laakiin weeraryahanka reer Boortaqiiska ayaa go’aansaday inuu iska indho tiray sheegashadan wuxuuna u qaatay warbaahinta bulshada inuu ku amaano Pele dhaxalka uu abuuray.
Ronaldo wuxuu soo dhigay barta Instagram: ‘Maanta, markii aan gaaro goolka rasmiga ah ee 770-aad ee xirfadeyda xirfadeed, ereyadaydii ugu horreeyay waxay toos ugu socdaan Pele.
Ma jiro ciyaaryahan adduunka ah oo aan kor loo qaadin oo dhageysanaya sheekooyinka ku saabsan kulamadiisa, himilooyinkiisa iyo guulaha uu gaadhay, mana ihi wax ka reeban.
Sababtaas awgeed, waxaan ku faraxsanahay farxad iyo sharaf maadaama aan qirayo hadafka iga dhigaya liiska gooldhalinta adduunka, inaan ka gudbo rikoorka Pele, oo ah wax aanan waligey ku riyooneynin markii aan yaraa markii aan ahaa cunug joogay Madeira.’
Pele wuxuu ka jawaabey hadaladii Ronaldo, isagoo dhajiyay: ‘Hambalyo ku aadan jabinta rikoorkeyga goolasha ee kulamada rasmiga ah.
Aad baan kuu jeclahay, waan jeclahay daawashada aad ciyaareyso tanina wax qarsoon uma ahan qofna. Waxa kaliya ee aan ka qoomameynayaa ma awoodo inaan ku siiyo hambalyo maanta.’
Ronaldo goolasha uu dhaliyay waxaa ka mid ah 668 heerka kooxda, oo ay ku jiraan 188 Manchester United iyo 450 oo uu u dhaliyay Real Madrid, halka uu sidoo kale dhaliyay 120 gool heerka caalamiga ah ee Portugal.
Bandhigay Cristiano Funaanad kadib loo markii qaas Ronaldo soo
Luca Toni Oo Yiri Romelu Lukaku Waxa Uu Ka Qatar Badan Yahay Ronaldo.
Falaqeynta Kulanka Adag Liverpool Vs Real Madrid Ee UEFA Champions…
Manchester United Oo Pogba Ku Bedelaneysa Cristiano Ronaldo.
AMISOM oo damaanad qaaday lana wareegtay amniga Teendhada Afisyooni
Wararkii ugu dambeeyey shirka maanta ka dhacaya Afisyooni